Etu ị ga-esi mee ka ọnọdụ ọchịchịrị rụọ ọrụ na Google Maps | Gam akporosis
Etu aga-esi rụọ ọrụ ochichiri nke Google Maps kpamkpam
Daysbọchị ndị a gara aga, anyị nwetara mmelite site na ihe nkesa nke na-enye anyị ohere Mee ka ọnọdụ gbara ọchịchịrị rụọ ọrụ na Google Maps kpamkpam; na ị ga-eche ihe kpatara hel onye mmadụ ga-eji chọọ ime nke ahụ, n'ihi na maka ebumnuche dị mfe nke visibiliti ma ọ bụ ike ọgwụgwụ anya na n'ọnọdụ ụfọdụ, ndị nwere ihuenyo AMOLED, na-echekwa batrị.
Ma nke ahụ bụ Google kwupụtara mmelite isii nke ga-abata ụbọchị gara aga ka gam akporo ọrụ, na otu nke ga-agụnye a n'ezie ọchịchịrị mode ka ya dị ka na-adịgide adịgide; N'aka ozo, maka ihe uto anyi puru iri ya ma eziokwu bu na o di nma.
Ike ọgwụgwụ nke anya bụ otu n’ime ihe ndị siri ike ihe kpatara anyị ji nwee ike ịhọrọ maka isi okwu gbara ọchịchịrị na Google Maps. N'ezie, Google dabere na nke a iji kwuo okwu na otu n'ime ihe kpatara na onye ọrụ nwere ike ịhọrọ isiokwu a nke na-ebelata ìhè nke ihuenyo mgbe anyị na-agagharị ma ọ bụ na-enyocha Maapụ.
Eziokwu bu na mgbe emechara gi, Ọnọdụ ọchịchịrị a na-adịgide adịgide nwere amara ya nke agba agba chapụrụ achapụ na-apụta ìhè na nke ahụ na-enye anya ọzọ na ihe niile anyị na-eme site na nnukwu ngwa Google a (lelee nseta ihuenyo anyị ewerela).
Así anyị na-eme ka ọrụ Google Maps rụọ ọrụ na-adịgide adịgide:
Anyị na-emeghe Google Maps (Anyị na-elele na emelitere ya na Playlọ Ahịa Google)
Imeghe ntọala anyị na-aga:
Site na ihuenyo izizi anyị pịa profaịlụ anyị emi odude ke enyọn̄ enyọn̄ enyọn̄
Anyị gbadaa na ntọala
Pịa na isiokwu
Ugbu a, anyị ga-enwe nhọrọ ịhọrọ: "Ọchịchịrị mgbe niile"
Anyị nwere nhọrọ nke ịhapụ ya dabere na isiokwu nke mkpanaka ahụ, ma ọ bụ ehihie ma ọ bụ abalị ma ọ bụ dị ka ọ dị na mbụ. Ya mere ị nwere ike gbanwee isiokwu gbara ọchịchịrị nke Google Maps; dịka ị nwere ike ịme ya ụzọ mgbe ị na-ahazi ihuenyo nkewaM na-agagharị na augmented eziokwu nchọgharị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Etu aga-esi rụọ ọrụ ochichiri nke Google Maps kpamkpam
Gbalịa gosipụta ihe ngosi dị na Geforce UGBU a na ekwentị mkpanaaka gị
Otu esi eme ka ozi na-ebibi onwe gị na Telegram